West Ham United Oo Go'an Naxdin Ku Ah Man United Kasoo Saartay Iibinta Declan Rice
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWest Ham United oo go’an Naxdin ku ah Man United kasoo saartay iibinta Declan Rice
West Ham United oo go’an Naxdin ku ah Man United kasoo saartay iibinta Declan Rice
April 15, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
West Ham United ayaa lagu soo waramayaa inaysan diyaar u aheyn inay marti galiso wax dalab ah xagaagan Declan Rice .
22 jirkaan ayaa fure u ahaa kooxda Hammers intii lagu jiray ololihii 2020-21, isagoo dhaliyay hal gool isla markaana caawiye ka ahaa 32 kale oo tartamada oo dhan ah.
Rice ayaa door hoggaamineed ka ciyaaray afarta koox ee ugu sarreysa kooxdiisa, in kasta oo ciyaaryahanka khadka dhexe uu seegay guushii u dambeysay ee ay ka gaareen Wolverhampton Wanderers iyo Leicester City dhibaato jilibka ah awgeed.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa sheegtay in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England uu xiiseynayo inuu u dhaqaaqo Manchester United inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo Red Devils loo maleynayo inay miisaameyso dalabkiisa.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay football.london , Hammers ayaa soo saartay ‘digniin ku socota kooxda Ole Gunnar Solskjaer , taasoo muujineysa inaysan diyaar u aheyn inay ku iibiyaan suuqa soo socda.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda David Moyes aysan u furneyn wax dalab ah oo ku aadan da ‘yarkii hore ee Chelsea, kaasoo 141 kulan u saftay West Ham tartamada oo dhan.
Rice ayaa qandaraas kula jira London Stadium illaa Juun 2024, iyadoo ikhtiyaar u ah 12 bilood oo dheeri ah.